The Alkaline Diet - Ahoana no hanarahana azy io mba hahavery lanja AZY MIASA | Nutri Diet
Sergio Gallego | | sakafo, Vatsim-pivelomana
Ankehitriny dia betsaka ny sakafo hanina hampihenana lanja, ny sasany tsy salama ary manimba tanteraka ny fahasalamana ary ny hafa mifanohitra amin'izany manampy anao hanary lanja amin'ny fomba mahomby sy mahasalama. Amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka aminao aho ny sakafo alkaly, iza no miaro fa maro amin'ireo aretina mitranga ankehitriny dia vokatry ny tsy fihinanan-tsakafo sy asidra avo lenta izay ao amin'ny vatana. Amin'izany fomba izany, ity drafitry ny fihenan-danja ity dia manoro hevitra ny fihinanana andian-tsakafo izay manana fatran'ny alkalinity avo lenta, izay manampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny asidra vokarin'ny sakafo hafa.
1 Ny haavon'ny pH ao amin'ny vatana
2 Sakafo alikaola
3 Sakafo asidra
4 Tombony amin'ny sakafo alkalinina
5 Ny fatiantoka amin'ny sakafo alkaly
6 Torohevitra sy torolàlana rehefa manomboka ny sakafo alkaly
7 Ireo singa hafa izay manampy amin'ny fandanjana ny pH ao anaty ra
Ny haavon'ny pH ao amin'ny vatana
Ny haavon'ny pH dia ampiasaina handrefesana ny asidra'ny vatana. ny haavon'ny pH mahazatra ao amin'ny ra sahabo ho 7,5 eo ho eo. Ilaina ny sakafo tsara mba hananana haavon'ny pH tsara ary hanalavirana ny fisehoan'ny aretina isan-karazany. Ny sakafo alkaline dia mitady fa ny pH ao anaty ra dia ampy ary mampanantena ny amin'ity fihenan-danja ity, ny fahasalaman'ny taolana tsara ary ny fisorohana ireo aretina samihafa ateraky ny asidra avo lenta.
Ireo izay fantatra amin'ny anarana hoe sakafo alkaline dia manan-karena mineraly toy ny sodium, calcium, potassium ary magnesium. Ny sakafo alkaline dia miaro ny sakafo voalanjalanja miorina amin'ity andiana sakafo ity. Amin'izany fomba izany dia tokony hampidirina amin'ny sakafo isan'andro ianao voankazo sy legioma toy ny broccoli, asparagus, zucchini, voatabia, na avokado. Tsy ho very koa izy ireo voanjo toy ny kennel na amandy ary legioma toy ny papasy na voanio.
Ilaina ny fihinanana sakafo misy asidra hahatratrarana ny haavon'ny pH ao anaty ra. Manankarena mineraly toy ny fosforôra, vy ary iode izy ireo ary hita ao Nofo mena, in ny hazan-dranomasina, ao amin'ny vokatra vita amin'ny ronono na amin'ny siramamy voadio.
Tombony amin'ny sakafo alkalinina
Sakafo izay mamporisika ny fihinanana sakafo mahasalama mifototra amin'ny sakafo mahavelona toy ny voankazo, legioma na voanjo. Ho fanampin'izany dia mandrara ny fihinanana tavy, alikaola na siramamy.
Araho ity karazana drafitry ny fihenan-danja ity dia hanampy ilay olona handatsaka pounds fanampiny amin'ny fomba mahasalama sy mandaitra tanteraka. Amin'ny lafiny iray, ny fihinanana sakafo asidra sy alika dia manampy amin'ny fihenan'ny lanjany amin'ny fomba lehibe.
Ny tombony hafa amin'ny sakafo alkalinina dia ny fisorohana ny aretina mety hitranga toy ny vanin-taolana, mampitombo ny angovo ao amin'ny vatana na manampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny tebiteby ao amin'ilay olona.
Ny fatiantoka amin'ny sakafo alkaly
Toy ny ankamaroan'ny sakafo, alohan'ny hanombohana ny sakafo alkaly toro-hevitra ny manatona mpahay sakafo iray mba hanombanana raha fitondrana mendrika mendrika harahina sa tsara kokoa ny manomboka amin'ny karazan-tsakafo hafa. Ny dokotera mila manao fitsapana vitsivitsy ianao hanamarinana ny haavon'ny pH ao anaty ra ary fantaro raha mila mihinana sakafo asidra sy alkaly ianao. Raha sendra diabeta ianao dia tsy amporisihina hanaraka an'io karazan-tsakafo io satria mety hanova ny fahasalamanao izany.
Torohevitra sy torolàlana rehefa manomboka ny sakafo alkaly
Ireo miaro ny sakafon-alkaly dia mampiroborobo fa ny fifandanjana pH dia manatsara ny fahatsiarovana izany manana hery bebe kokoa ny vatana ary ny avo kokoa ny kalitaon'ny torimaso. Na izany aza, karazan-tsakafo tsy azonao atomboka amin'ny tenanao izany satria tsara ny manatona mpitsabo aretin-tsaina izay hamerina hijery anao ary hilaza aminao raha toa ka mendrika ny manomboka sakafo toy izany.
Manaraka izany dia hanome anao ohatra iray aho momba izay mety ho menio isan'andro amin'ny alikaola alkaline mba hahafahanao manamarika ary afaka mamorona menioo manokana ianao.
Amin'ny fotoan'ny sakafo maraina dia afaka misafidy ny hanana ranom-boankazo vita amin'ny legioma sy voankazo.
Ho an'ny misasakalina dia afaka manana rano roa vera ianao voankazo iray.
Amin'ny sakafo atoandro dia afaka manamboatra lovia legioma ravina maitso ianao. Azonao atao ny manambatra an'io lovia io amin'ny serealy na legioma sasany satria mety aminao ny maka proteinina fiaviana.
Ho an'ny sakafo maivana dia azonao atao infusion na voankazo iray.
Raha ny sakafo hariva dia tsara kokoa ny misafidy lovia kely kaloria sy maivana toa ny legioma voatono na oatmeal misy voankazo sasany.
Ireo singa hafa izay manampy amin'ny fandanjana ny pH ao anaty ra
Ankoatry ny fihinanana alkaline dia misy singa maromaro hafa izay afaka manampy anao handanjalanja ny pH ao anaty ra ary hisorohana ireo olana ara-pahasalamana amin'ny ho avy.
Ataovy kely ny fanatanjahan-tena ara-batana tsy tapaka Manampy ny metabolisma hiasa tsy tapaka izy io ary amin'io fomba io dia afaka manafoana ny loto sy poizina ao amin'ny vatana ary mety hampiakatra ny PH be loatra.
Zava-dehibe ny manadio ny vatana indraindray. Mba hanaovana izany, ho fanampin'ny rano fisotro azonao atao zava-pisotro karazana diuretic izay manampy amin'ny fanadiovana ny atin'ny vatana sy ny fanafoanana ny poizina.
Raha te hanana fandanjalanjana ao amin'ny vatana ianao, dia zava-dehibe ny fanananao mahay mandanjalanja amin'ny ambaratonga mampihetsi-po. Raha mahavita mampitambatra ny saina sy ny vatana ianao dia tsy hanana olana amin'ny asidra ao amin'ny vatana izay mety hiteraka olana amin'ny ho avy.
Araka ny hitanao, ny sakafo alkaly tsy azo raisina ho toy ny sakafo fahagagana satria tsy mitady fahaverezan'ny lanja be loatra ianao amin'ny fotoana fohy indrindra. Tsy voaporofo koa fa misy fiatraikany lehibe amin'ilay olona manapa-kevitra ny hanaraka azy. Na izany na tsy izany, raha ny zava-mitranga hatrany rehefa manomboka sakafo manokana dia tsara ny manatona manam-pahaizana hanome torohevitra anao raha mendrika ny hanaraka azy na tsia.
Avy eo dia avelako horonan-tsary manazava ianao mba ho mazava kokoa aminao inona ny sakafo alkaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » sakafo » Ny sakafo alkaly
Ahoana ny fomba hampitomboana ferritin voajanahary?